ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံကြီး၏သမိုင်းကြောင်း - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံကြီးကို ၁၉၇၉ခုနှစ်ကတည်းက Kasikorn ဘဏ်ရဲ့ ဥက္ကဌ Bancha Lamsam နဲ့ M.R. Bajarisan Jumbala, M.D တို့မှ အတူပူးပေါင်းပြီး စတင်တည်ထောင်ခဲ့ရာအခုဆိုရင်အချိန်တစ်ခုထိတိုင်ခဲ့ပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အတော်ဆုံးဆရာဝန်တွေနဲ့ သူနာပြုတွေကို စုစည်းပြီး သူတို့ကိုအဆင့်မြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု နည်းပညာတွေ ဖြန့်ဝေပေးကာ လူနာတွေနဲ့လူနာတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူနာတွေကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပြီး သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေတင်မကဘဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာမှုကိုပါ ဂရုစိုက်ပေးနိုင်တဲ့ ဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ M.R. Kukrit Pramoj ဟာ ဆေးရုံနာမည်ကို “ဆစ်မီတဝေ့” လို့ပေးခဲ့တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ “ဆရာဝန်တွေစုစည်းရာ” လို့ ဆိုလိုတာပါ။ဆစ်မီတဝေ့ ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ တည်ထောင်သူတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ဆရာဝန်တွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သူပေါင်း ၂,၃၀၀ လောက်ဟာ ဆစ်မီတဝေ့ ရဲ့ ဆေးရုံခြောက်ရုံမှာ လူနာတွေကို သာမန်အဖျားရောဂါကနေ ကြီးမားတဲ့ ခွဲစိတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ ကလီစာအစားထိုး လဲလှယ်မှုမျိုးကိုတောင် ပြုလုပ်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာတွေရှိနေပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ အထူးကုအဖွဲ့တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားကာ ဂရုစိုက်မှုပေးမယ့်သူတွေဟာလည်း အတွေ့အကြုံများပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံကြီးဟာ ရှေးယခင်ကတည်းက ဘန်ကောက်မြို့ လူထုကြီးရဲ့ ရွေးချယ်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ ဆေးရုံအနေနဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခုထက်ပိုပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရှိတဲ့အပြင် နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပါ အမြင့်မားဆုံးသော ဂရုစိုက်မှုတွေနဲ့ ဘန်ကောက်မှာ လာရောက်နေထိုင်သူတွေအပြင် ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံကြီးများဟာ Bangkok Dusit Medical Service (BDMS) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအဖွဲ့အစည်းဟာဆိုရင် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများရှိ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများ ဦးဆောင်နေသော အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆစ်မီတဝေ့ကို ၁၉၇၉ ဇွန်လ တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ပင်မရုံးကိုတော့ ဆစ်မီတဝေ့ ၄၉ လမ်း၊ ဘန်ကောက်မြို့ဆစ်မီတဝေ့ဆူခွန်ဗစ်ဆေးရုံမှာဖွင့်လှစ်ထားပါ တယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဆစ်မီတဝေ့အဖွဲ့ဝင်ဆေးရုံများ စုစုပေါင်း ၇ရုံရှိပါတယ်။
ဆစ်မီတဝေ့ ဆီရချာ ဆေးရုံကြီး
ဆစ်မီတဝေ့ Chinatown ဆေးရုံကြီး
ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံဟာထူးချွန်တဲ့ အကောင်းဆုံးဂရုစိုက်မှုနဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့ သမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၉ခုနှစ်မှာ ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး WHO နဲ့ UNICEF က ပေးအပ်တဲ့ Mother and Baby Friendly Hospital အသိအမှတ်ပြုဆေးရုံ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တခြားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များအနေနဲ့ ၂ဝဝ၄ခုနှစ်မှာ Prime Minister Award ကို Most Recognized Service အနေနဲ့ရခဲ့ပါတယ်။ Hospital Accreditation Board of Thailand နဲ့ JCI မှ အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ဆေးရုံလဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေကို ပြုလုပ်နေပြီးလူနာတွေ ဧည့်သည်တွေနဲ့ နားခိုသူတွေအားလုံးကို အမြင့်ဆုံးဂရုစိုက်မှုတွေ ပေးဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်နေပါတယ်။ အမြင့်ဆုံး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးနေသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အရည်အသွေးမှီတဲ့ ဂရုစိုက်မှု၊ နောက်ဆုံးပေါ် ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနာတွေကိုပေးနိုင်ဖို့ ကတိပြုပါတယ်။
ဆစ်မီတဝေ့ဆူခွန်ဗစ် ဆေးရုံကြီး ဆူခွန်ဗစ် ၄၉ လမ်းတွင် တည်ရှိပြီး အရှေ့တောင်အာရှတွင်ရှိသော ဦးဆောင်နေသောပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများ ထဲက တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။ ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့ ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံဟာ ၂၇၅ ကုတင်ဆံ့ ဆေးရုံဖြစ်ပြီး အထူးကုပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နည်းပညာတွေရှိနေပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ အထူးကုအဖွဲ့တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားကာ ဂရုစိုက်မှုပေးမယ့်သူတွေဟာလည်း အတွေ့အကြုံများပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆစ်မီတဝေ့ဆူခွန်ဗစ် ဟာ ရှေးယခင်ကတည်းက ဘန်ကောက်မြို့ လူထုကြီးရဲ့ ရွေးချယ်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ ဆေးရုံအနေနဲ့ ဘာသာစကားတစ်ခုထက်ပိုပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရှိတဲ့အပြင် နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပါ အမြင့်မားဆုံးသော ဂရုစိုက်မှုတွေနဲ့ ဘန်ကောက်မှာ လာရောက်နေထိုင်သူတွေအပြင် ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဆစ်မီတဝေ့ဆရီနာကရင် ဆေးရုံကြီး ဘန်ကောက်မြို့အရှေ့ဘက်ရှိ ပိုင်းတွင်တည်ရှိသော ဆစ်မီတဝေ့ ဆရီနာကရင်ဆေးရုံကြီးဟာ Suvamabhumi လေဆိပ်နားမှာရှိတဲ့အတွက်သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေ လွယ်ကူပါတယ်။ ကုတင်ပေါင်း ၄၀၀ နှင့် ကျွမ်းကျင်အထူးကု အဖွဲ့ဝင်များစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်အတတ်ပညာရှင်များ၅၀၀ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူနာများဟာ ဆိုရင် လေဆိပ်မှဆေးရုံသို့ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆစ်မီတဝေ့ကလေးဆေးရုံကြီး ကလေးဆေးရုံကတော့ အခွဲနှစ်ခုရှိပြီး ဆစ်မီတဝေ့ ဆူခွန်ဗစ် နဲ့ ဆစ်မီတဝေ့ ဆရီနာကရင် ဆေးရုံကြီးများတွင် တည်ရှိပါတယ်။ ဆေးရုံအခွဲနှစ်ခုလုံးမှာ ကျွမ်းကျင်ကလေးအထူးကုသမားတော်ကြီးများ ၁၅၀ ကျော် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ကလေးရိုးရိုးဖျားနာခြင်းအပြင်ခွဲစိပ်ကုသပေးခြင်းများ စသည့်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ဆေးရုံခွဲနှစ်ခုလုံးမှာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးကျန်းမာရေးအထူးကြပ် မတ်ဆောင်များ၊ မွေးကင်စ မှ စ၍ လသားလေးများအတွက် အထူးကြပ်တတ်ကုသဆောင်များ (NICU) (PICU) ၊ခွဲစိပ်ကုသဆောင်များ၊ ဦးနှောက်အာရုံကြောဆိုင်ရာ ခွဲစိပ်ကုသမှုများ၊ နှလုံး နှင့် ဆီးလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ခွဲစိပ်ကုသမှုများ ကို ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ ကလေးကျန်းမာရေးအခြေအနေ အတွက် အထူးကုသမှုများ ဆေးရုံသို့ လေကြောင်းခရီးပို့ဆောင်မှုများဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများလည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
ဆစ်မီတဝေ့ ဆီရချာ ဆေးရုံကြီး ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ ၁၁၀ ကီလိုမီတာ အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိပြီး ကုတင်ပေါင်း ၁၅၀ ပါတယ်။ ဤဆေးရုံကြီးဟာဆိုရင် Pattaya နှင့် Laem Chabang စက်မှုဇုံနေရာများတွင်နေထိုင်သော ဒေသခံပြည်သူပြည်သားများ အတွက် သာမက ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လာရောက်နေထိုင်သော နိုင်ငံခြားသားများ၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအတွက်ပါ အဓိကအချက်အချာကျတဲ့ ကျန်းမာရေးထောက်ပံပေးသောနေရာဟုလည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ဂျပန်နိုင်ငံသားများအတွက် အထူးအခွင့်ထူးအနေဖြင့် One-Stop-Service ကိုလည်း ပေးထားပါသေးတယ်။
ဆစ်မီတဝေ့သွန်ဘူရီ ဆေးရုံကြီး ကုတင် ၁၅၀ ဆံ့ပြီး ကျယ်ဝန်းသော ကျန်းမာရေးစင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ရင်သားကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော ကုသရေးစင်တာ၊ ဓါတ်မတည့်သောရောဂါကုသစင်တာ၊အရိုးအထူးကု စင်တာ နှင့် မျက်လုံးကျန်းမာရေးကုသစင်တာများရှိပါတယ်။ သွားလာရေးလွယ်ကူပြီးစီးပွားရေးအချက်အချာကျသော နေရာတွင်တည်ရှိသည့်အပြင် BTS Skytrain နှင့်လည်းနီးသောကြောင့်သွားရေးလာရေးပိုမို လွယ်ကူစေပါတယ်။
ဆစ်မီတဝေ့ချွန်ဘူရီ ဆေးရုံကြီး ကုတင် ၇၉ ဆံ့ပြီး ၎င်းဒေသခံများကို အရည်သွေးမြင့် စံနှုန်းရှိသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုသမှုများကိုပေးနေ သော အကောင်းဆုံးဆေးရုံဖြစ်ပါတယ်။ အရေးပေါ်ကုသဆောင်၊ အထူးကြပ်မတ ဆောင်၊ ပြင်ပလူနာဆောင် နှင့် အတွင်းလူနာဆောင် အပြင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို အပြည့်အဝပေးနေပါတယ်။
ဆစ်မီတဝေ့ Chinatown ဆေးရုံကြီး ကုတင် ၃၁ ဆံ့ပြီး ဘန်ကောက်မြို့ရှိ တရုတ်တန်း တွင် တည်ရှိပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများက အကောင်းဆုံး ဆေးကုသမှုကို ပေးလျှက်ရှိနေပါတယ်။ ထို့အပြင်အဆင့်မြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများဖြင့် မျက်လုံးကျန်းမာရေး နှင့် Physical therapy ၊ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကို အကောင်းဆုံးကု သမှုပေးနေသောဆေးရုံဟု အမည်ကျော်ကြေားသော ဆေရုံဖြစ်ပါတယ်။
ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံကြီးဟာ ဆိုရင် မြန်မာပြည်ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်း ဆေးခန်းနှစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။